नेयमार भित्र्याउन बार्सिलोना र रियल मड्रिडको प्रतिस्पर्धा ! – MediaNP
नेयमार भित्र्याउन बार्सिलोना र रियल मड्रिडको प्रतिस्पर्धा !
काठमाडौंः ब्राजिल तथा पेरिस सेन्ट जर्मेन (पिएसजी)का स्टार नेयमारलाई अनुबन्ध गर्न स्पेनिस क्लब बार्सिलोना र रियल मड्रिडबीच प्रतिस्पर्धा चलेको स्पेनिस मिडियाले जनाएका छन् । नेयमारले पिएसजी छोड्ने निर्णय लिइसकेको अवस्थामा दुई स्पेनिस क्लबले उनलाई अनुबन्ध गर्न चाहेको बताइएको छ ।
लिभरपुलसँग च्याम्पियन्स लिगको सेमिफाइनलमा लज्जास्पद हार व्यहोरेपछि बार्सिलोनाले आफ्ना पूर्व स्टारलाई क्लबमा ल्याउन खोजेको छ । नेयमारलाई अनुबन्ध गर्न बार्सिलोनाले फिलिपे काउटिन्हो, इभान राकिटिक, सामुएल उम्टिटी र माल्कोमलाई बेच्ने तयारी गरेको बताइएको छ ।
२०१७ मा नेयमार विश्वकिर्तिमानी रकम २२२ मिलियन पाउण्डमा बार्सिलोनाबाट पिएसजी गएका थिए । पिएसजीमा दोस्रो सिजन बिताइरहेका उनी क्लबमा खुसी नरहेको बताइएको छ । चोटका कारण लामो समय मैदान बाहिर रहनु परेको र उनको अनुपस्थितीमा पिएसजीले च्याम्पियन्स लिगको अन्तिम १६ पार गर्न नसकेको भन्दै उनी पिएसजी छोड्ने मुडमा पुगेको फ्रेन्च मिडियाले दावी गर्दै आएका छन् । यस्तो अवस्थामा बार्सा र रियल उनलाई अनुबन्ध गर्न चाहेका छन् । बार्साका कप्तान लियोनल मेस्सी, लुइस स्वारेज लगायत समेत नेयमारलाई फिर्ता ल्याउनुपर्ने पक्षमा रहेको बताइन्छ ।
यता इतिहासकै खराब परिस्थितीबाट गुज्रिरहेको रियलले समेत नेयमारलाई अनुबन्ध गर्न चाहेको छ । क्रिस्टियानो रोनाल्डोले छोडेपछि रियलले उनको उपयुक्त विकल्प खोज्न सकेको छैन । रियलका अध्यक्ष फ्लोरेन्टिनो परेज रोनाल्डोको उपयुक्त विकल्प नेयमार भएको विकल्प खोज्न सकेको छैन । रियलका अध्यक्ष फ्लोरेन्टिनो परेज रोनाल्डोको उपयुक्त विकल्प नेयमार भएको निष्कर्षमा छन् । त्यसैले रियलले नेयमार अनुबन्ध गर्न २५० मिलियन यूरोको प्रस्ताव लैजाने भएको छ । यता केही समय अघि इंग्लिस क्लब म्यानचेस्टर सिटी समेत नेयमारलाई अनुबन्ध गर्न इच्छुक रहेको बताइएको थियो ।
सन् २०१३ मा समेत रियल र बार्सिलोना नेयमारलाई अनुबन्ध गर्न प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका थिए । तर, रियललाई उछिन्दै बार्सिलोनाले नेयमारलाई ब्राजिलियन क्लब सान्टोसबाट भित्र्याएको थियो ।
हास्यकलाकार मनोज गजुरेलको जन्मदिनमा पूर्वपत्नी मिना ढकालले लेखिन् स्ट्याटस
३० बर्ष लागे मार्सेलो, यस्ता छन् उनका जिवनका तथ्य